करोडाैंपति पियनविरुद्ध मुद्दा दायर : अर्बपति खरिदार असुलीमै मस्त ! - Sidha News
करोडाैंपति पियनविरुद्ध मुद्दा दायर : अर्बपति खरिदार असुलीमै मस्त !
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय चावहिलका कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतले भ्रष्टाचार गरी ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार ६ सय १३ रुपैयाँ आय नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएपछि २०७६ माघ १६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कार्यालय सहयोगी बस्नेतले राजस्व रसिद नै नक्कली छपाई गर्नेदेखि कानुन विपरीत छुट जग्गा दर्ता गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएपछि उनीबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । करिब १० करोड रुपैयाँ उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्पत्ति अख्तियारले फेलापारेको छ । तर कार्यालय सहयोगी बस्नेतले सरकारी जग्गा हकदाबीका सूचना प्रकाशित गर्ने र आफ्ना मानिसको नाममा निवेदन हाल्न लगाएर दर्ता गरेका पचासौं कित्ताको बारेमा अख्तियारले अझै पनि खोजी गरेको छैन ।
कार्यालय सहयोगी बस्नेत विगत १७ बर्षदेखि चावहिल मालपोत कार्यालयमा कार्यरत थिए । उनको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक बर्ष गथ्र्यो तर उनी कहिले मन्त्री, सचिवहरु प्रयोग गरी बदर गराउँथे त कहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाली अन्तरिम आदेश गराउँथे । दर्जाले कार्यालय सहयोगी उनी कार चढेर कार्यालय आउँथे, अधिकृतदेखि कार्यालय प्रमुखलाई काम अह्राउने गर्दथे । कार्यालय प्रमुखको सरुवा नै उनकै योजनामा हुन्थ्यो । चावहिल मालपोत कार्यालयमा सरुवा गराउन अधिकृतहरु उनको सोर्सफोर्स लगाउ“थे । यस्तो हैकम जमाएर बसेका उनका बिरुद्ध गैरकानुनी श्रेस्ता तयार गरी जग्गा दर्ता गरेर बिक्रीबितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७४ भदौ १४ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
चाबहिल मालपोत कार्यालयका बस्नेत सहति १० कर्मचारीसमेत ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उनी २ बर्षदेखि निलम्बनमा थिए । उक्त जग्गा दर्ताका डिजाइनर उनै बस्नेत नै थिए । अरु कर्मचारी उनको लहलहैमा पर्दा मुद्दा खेप्नेमा परेका छन् । शक्ति र पैसाको आडमा जे जस्ता काम गर्दा पनि छुट पाइन्छ भन्ने भ्रम पाल्दा कार्यालय सहयोगी बस्नेतका बिरुद्ध करिब १० करोड गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दायर भइसकेको छ । कार्यालय सहयोगी बस्नेत एक उदाहरण हुन्, चावहिल मालपोत कार्यालयमा ८ बर्षदेखि कार्यरत खदिार लक्ष्मण बस्नेतले पनि भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका थुप्रै उजुरी अख्तियारमा छन् । उनलाई आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले शुभलाभ लिएर संरक्षण गर्दैआएका थिए । बस्नेतले मालपोत कार्यालय चावहिलमा गरेका काण्डहरुको नालीबेलीमध्ये केही यस्ता छन्ः
२०७५ भदौ अन्तिममा ललितपुरका चन्दनकृष्ण कायस्थको बूढानीलकण्ठमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने घडेरी कीर्ते गरेर बेचबिखन गरेको प्रकरणमा मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमल तिमल्सिनालगायत कर्मचारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर ग¥यो । चावहिल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कामु प्रमुख पदम अर्याल र खरिदार लक्ष्मण बस्नेत मिलेर दर्ता बा“की जग्गा सरकारको निर्णयबेगर नै धमाधम दर्ता गरे तर उनीहरुलाई कारबाही हुन सकेन । छानबिन भएन ।
चावहिल मालपोत कार्यालय अन्तर्गत साविक गोठाटार, बालुवा, मूलपानी, विष्णु बूढानीलकन्ठ गाविसमा दर्ता हुन बा“की धेरै जग्गा थिए । ती जग्गा बस्नेतले कार्यालय प्रमुखस“ग मिलेर दर्ता गरेको आरोप छ । यस्ता जग्गाहरू गैरकानूनी श्रेस्ता तयार गरी दर्ता गरेर बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले चाबहिल मालपोत कार्यालयका १० कर्मचारीसहित ५४ जनाविरुद्ध २०७४ भदौ १४ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसरी गैरकानूनी जग्गा दर्तामा संलग्न देखिए पनि खरिदार लक्ष्मण बस्नेतलाई भने अख्तियारले मुद्दा दायर नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो । उक्त जग्गा दर्तामा सबैभन्दा बढी घुस लिने खरिदार बस्नेतलाई जोगाउने काम तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतले गरेका थिए ।
ती कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा गैरकानूनी ढंगले श्रेस्ता खडा गरी, कार्यालयमा रहेको दर्ता बाँकी श्रेस्ता केरमेट तथा प्रमाणित गरी, कार्यालयबाट बैधानिक रुपमा निर्णय नै नभएका जग्गाहरूको विवरण ठीक देखाएर कीर्ते गरेको अख्तियारले जनाएको थियो । यसरी गैरकानूनी श्रेस्ता तयार गरी जग्गा दर्ता गर्ने जग्गाधनीहरू हरिनारायण श्रेष्ठ, हरिलाल श्रेष्ठ, होम बहादुर बिष्ट, धर्म महर्जन, श्याम सुन्दर दाहाल, विश्वनाथ लामिछाने र ध्रुवराम श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरियो ।
अर्बपति खरिदार बस्नेत को हुन् ?
खरिदार लक्ष्मण बस्नेत जागिर सुरु गरेदेखि नै मालपोत कार्यालयमा कार्यरत छन् । उनी जागिरे जीवनको अधिकांश समय चावहिल र भक्तपुर जस्ता काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमै कार्यरत छन् । चावहिल मालपोत कार्यालयमा उनी कार्यरत रहेको ८ बर्ष भइसकेको छ । यसअघि उनी भक्तपुरमा कार्यरत थिए । उनी भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा अर्बपति खरिदारका रुपमा चर्चित छन् ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अर्बपति खरिदार लक्ष्मण भट्टराई १५ बर्षदेखि रजिष्ट्रेसन फाँटमा भएजस्तै चावहिलमा लक्ष्मण बस्नेतले ८ बर्षदेखि लगातार मुद्दा फाँटमा बसी गैरकानूनी जग्गा दर्ता गरी करोडौं करोड घुस संकलन गरिसकेको अख्तियारको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । खरिदार बस्नेतले धोवीखोलाको नदी उकासका सार्वजनिक जग्गाहरू पनि घुस लिएर दर्ता गरेको आरोप छ ।
यसअघिका चावहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख गोविन्द अधिकारी, पृथुबहादुर केसी, कामु प्रमुख बद्रीबहादुर कार्की, कमल तिमल्सिना, पदम अर्यालदेखि कलकबहादुर खड्कासम्मलाई प्रभावमा राख्नसक्ने कला भएका हुन् खरिदार बस्नेत ।
उनीविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार गरी आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले उनीबाट ठूलै रकम लाभ लिएर तामेलीमा हालेका थिए । मालपोतका खरिदार बस्नेतले अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतको बहिर्गमनपछि पुनः अर्को उजुरी परेको समाचार छ ।
स्रोतका अनुसार, धादिङ मालपोतमा हुँदा राजमार्गको छेउ र खोला किनारका सरकारी जग्गा वन समेत गैरकानूनी ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप छ । धादिङको राजमार्गछेउमा १ रोपनी जग्गा हुनेलाई पछाडिको जंगलसमेत हालेर २ वटा जिरो थपी १०० रोपनीको पूर्जा दिने काममा पनि बस्नेत संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । जुन जग्गाको एक चरणको छानबिन सकेर मुद्दा दायर भइसकेको छ भने अर्को चरणको छानबिन अलपत्र छ ।
खरिदार लक्ष्मण बस्नेतलाई निजामती सेवा ऐन नियम पनि केही लागू हुँदैन । निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर उनका हकमा निजामती सेवा ऐनको यो प्रावधान लागू हुने गरेको छैन । घुसका बलले सामान्य प्रशासन मन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा राख्दै उनले सरुवा रोक्ने गरेका छन् । सरुवा भइहाले पैसाको बलले बदर गराउँदैआएका छन् ।
खरिदार बस्नेतलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७३ भदौ अन्तिममा हुलाक कार्यालयमा सरुवा गरे पनि उनले २०७३ पुससम्म रमाना लिएनन् । र, माघमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई घुस दिएर पुनः चावहिलमै दरबन्दी कायम गराउन सफल भएका थिए । यसरी पदीय दुरुपयोग गर्ने बस्नेत अहिले पनि चावहिल मालपोतमै असुलीमा ब्यस्त छन् । उनका बारेमा साँघुले पटक पटक ध्यानाकर्षण पनि गराउँदैआएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक २०७६ माघ २० गते)